यसकारण महिलाहरु आफ्नो लोग्ने भन्दा अर्काको श्रीमान नै रोज्दा रहेछन |
यसकारण महिलाहरु आफ्नो लोग्ने भन्दा अर्काको श्रीमान नै रोज्दा रहेछन
२०७५, २७ बैशाख बिहीबार २३:०० May 10, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण पारिवारिक रुपमा विभिन्न समस्याहरु निम्तिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । श्रीमान विदेशमा रहेको मौकामा महिलाहरु परपुरुषसँग लागेका थुप्रै घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
आखिर किन महिलाहरु अरुका श्रीमानलाई ताक्छन् अर्थात परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्छन् ? यसका विषयमा गहन अध्ययनको जरुरत छ । तर, जापानमा भने अनौठो तथ्यको खुलासा भएको छ ।
कण्डम निर्माता कम्पनी सागमी गोमुले गरेको सवेक्षणका अनुसार जापानमा आधाजसो वैवाहिक सम्बन्ध सम्भोगरहित हुन्छन् । आखिर किन भयो होला यस्तो ? कारण पनि निकै डरलाग्दो छ । जागिर गर्ने श्रीमतीहरुले बाहिरै परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेकै कारण लोग्नेस्वास्नीबीच सेक्स नहुने गरेको तथ्य सर्भेले खुलासा गरेको छ ।
जापानका धेरै कामकाजी महिलाहरुले आफ्नो लोग्नेसँग सम्भोग नगर्ने र कार्यालयको कामका सिलसिलामा भेट हुने पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने गरेकै कारण उनीहरुले आफ्नो लोग्नेसँग सम्भोगका लागि तयार नहुने गरेका हुन् ।
सर्भेक्षणमा सहभागी ५ सय जना ४० वर्षको उमेरका महिलाहरु मध्ये ११ प्रतिशतले परपुरुषसँग सम्भोग गर्ने गरेको स्वीकारेका छन् । त्यस्तै १२ प्रतिशतले आफ्नो लोग्ने भन्दा बाहिरको पुरुषसँग सम्भोग गर्न मन पर्ने जवाफ दिए ।
केही महिलाले नैतिक रुपमा परपुरुषसँगको सम्बन्धका बारेमा आफुले सोँच्न पनि नसक्ने बताए । १० प्रतिशतले त आफूले परपुरुषसँग राखेको सम्बन्धका बारेमा लोग्नेले थाहा पाउँछ कि भनेर निकै डराउने गरेको जवाफ दिए । परपुरुषसँग के को माध्यमबाट भेटेर संसर्ग गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा ३१ दशमलव ५ प्रतिशतले अफिसमै भेटेर यौनक्रिया गर्ने गरेको बताए ।
२४ प्रतिशतले इन्टरनेट मार्फत सम्बन्ध कायम गर्ने गरेका रहेछन् । अर्को रोचक कुरा त के भने साढे १८ प्रतिशत त आफ्नो भूपू ब्वायफ्रेण्डसँग सम्भोगमा मग्न हुँदा रहेछन् ।
परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेकै कारण आफ्नो श्रीमानसँग सम्भोग नगरेको कति वर्ष भयो भन्ने प्रश्नमा ६३ प्रतिशतले ११ वर्ष भयो भन्ने जवाफ दिए । त्यसरी परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने मध्ये ६८ प्रतिशतले यस्तो सम्बन्धका कारण आफुलाई कुनै पश्चाताप नरहेको बताए ।
तलको लेख श्रीमान श्रीमती संगै बसेर पढ्नुहोस
एक दिन श्रीमान घर आउँदा निकै अबेर भएछ । अनी घर आएर ढोका बाट भित्र छिर्न न पाउदै श्रीमतिले भनिछन । कहाँ जानु भएको थियो ? मैले हजुरको अफिसमा पनि फोन गरी सोधे । हजुर त आज अफिस पनि हुनुहुन्थेन । के हो एस्तो चाला ? अनि यो हातमा भएको झोला कस्तो गनाई रहेको छ ।
के हो यो ?श्रीमान : म…म…. म आमालाई लिन गएको थिए । आमा अब यही बस्नु हुन्छ । यो झोला आमाको हो । यस्मा आमाको कपडाहरु छ ।श्रीमति (रिसले जुर्मुराउदै) :दिमाग त सही छ हजुरको ? किन आमालाई यहाँ ल्याउनु पर्यो र ?
हजुर कै दाजु भाइले हेरी हाल्छन नि, तेसै माथी हजुरको तलब ले के नै हुन्छ र ? छोरा छोरी लाई पढाउन त गाह्रो भैरहेको अवस्थामा अब यि बुढिलाई कसरी पाल्ने ? सक्दिन म त पाल्न । श्रीमान :त्यस्तो न भन, आमाको सेवा गर्नु त हाम्रो धर्म र कर्तब्य हो नि ।
श्रीमति :आफै बाच्न धौ धौ परेको बेलामा म त सक्दिन । यती भन्दै श्रीमतिले श्रीमानको हात बाट झोला खोसेर बाहिर लगेर फालिदिन्छिन । अनि यसो बाहिर हेर्दा त आफ्नै आमा पो रहेछ । अनि हत्तनपत्त झोला उठाउदै आमालाई लिएर भित्र आउछे र श्रीमान लाई भन्छे….….अगिनै भन्न पर्दैन ? मेरो आमा हो भनेर !श्रीमान :तिमीले मलाई बोल्नी मौका का दियौ र ?
एकोहोरो आफु मात्र बोलेको बोलै । तिम्रो दाई र भाउजुले तिम्रो आमालाई घर बाट निकाली दिएका रहेछन । अनि मैले थाहा पाएर म अफिस न गई आमालाई लिन गएको थिए । श्रीमति (मुस्कुराउदै)कती जाती र बुझ्नि हुनु हुन्छ है मेरो प्यारो बुढो । (एती भन्दै उ आमालाई लिएर भित्र कोठामा जान्छे)